सकियो तीनदिने निशुल्क आधारभूत पत्रकारिता तालिम ( फोटोफिचर ) | PBM News.com
चितवन २७ जेठ । थारु पत्रकार संघले आयोजना गरिएको तीनदिने निशुल्क आधारभूत पत्रकारिता तालिम सोमवार सकिएकोछ । अनलाईन भर्चुअल माध्यमवाट आयोजना गरिएको तालिमको अन्तिम दिन फिल्ड रिपोटीङको बारेमा पत्रकार ठाकुरसिंह थारु र आचार संहिताको विषयमा फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङले सहजीकरण गरेका थिए । जारी लक डाउनको समय सदुपयोग गर्न तालिम आयोजना गरिएको हो ।
तालिम समापन कार्यक्रममा बोल्दै फोनिज केन्द्रीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङले यस्ता खालका तालिमले लेखन सँगै नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका फोनिज केन्द्रीय अध्यक्ष गुरुङले अभ्यास नगरे सम्म कुनैपनि विषयमा सफलता प्राप्त नहुने बताए । थारु पत्रकारहरुले यो तालिमलाई अभ्यास गर्ने थलोको रुपमा लिन पर्ने बताए । कार्यक्रममा थारु पत्रकार संघका केन्द्रीय सल्लाहाकार डा. कृष्णराज सर्वहारीले जारी लडक डाउनको सहि सदुपयोग भएको भन्दै तालिममा सहभागीहरुलाई सिकेका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए ।
यस्तै थारु पत्रकार संघका केन्द्रीय सल्लाहाकार लक्की चौधरीले तालिमले धेरै नयाँ कुरा सिकाएको बताए । लक डाउनको समयमा आयोजना भएको तालिमले भर्चुअल ज्ञान सिक्न र सिकाउने कामले पत्रकारिता क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्ने बताए । प्रमुख प्रशिक्षक समेत रहनुभएका चौधरीले तालिममा सिकेको ज्ञानलाई पत्रकारिता भन्दा बाहिर पनि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिए । थारु पत्रकार संघका अध्यक्ष सन्तोष दहितको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको समापन कार्यक्रममा थारु पत्रकार संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष कारी महतो, मलेसियाबाट तालिममा सहभागी आरएन थारु, साइप्रसवाट तालिममा सहभागी भएकी सरिता चौधरीले तालिमको महत्व यस्को औचित्य सँगै तालिममा सिकेको अनुभव सुनाएका थिए ।
तालिममा थारु पत्रकार संघका महासचिव सन्तकुमार चौधरी, सल्लाहकारद्धय लक्की चौधरी, डा. कृष्णराज सर्वहारी, ठाकुर सिंह थारु, पार्वता चौधरी, प्राविधिक शिक्षक दुर्गाप्रसाद चौधरी र फोनिज केन्द्रीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङले सहजिकरण गरेका थिए । पहिलो चरणको तालिममा काठमाण्डौं सहित, देशका विभिन्न जिल्ला र विदेशवाट गरी ८० जना सहभागी थिए । दोश्रो चरणको तालिम पुन भोलीदेखि सुरु हुँदैछ ।
सहभागीहरुले के के भने –
कारी महतो – थारु पत्रकार संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष –
तालिमवाट नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाए । प्रविधिको प्रयोग सँगै समाचार लेखन लगायतका विषयमा राम्रो जानकारी पाए । तालिम अत्यन्तै राम्रो लाग्यो । तर यतिले मलाई पुगेन । आर्टिकल लेख्ने विषयमा अझै पूर्ण ज्ञान छैन । सिक्दैछु । म अझै नयाँ नयाँ खालका तालिम लिन चाहन्छु ।
आरएन चौधरी – हाल मलेसिया
मलाई तालिम निकै उत्कृष्ठ लाग्यो । प्रवासमै बसेर पत्रकारिता गर्दै आएकोछु । तर यस्तो खालको औपचारिक तालिम लिने अवसर पाएको थिइन । यो खालको तालिमले थप हौसला मिलेको छ। थारु पत्रकार संघ नेपाल प्रति आभारी छु । आगामी दिनमा यस्तै खालको तालिमले निरन्तता पाउँदै जाओस ।
सरिता चौधरी – हाल साइप्रस
पत्रकारिता मलाई अत्यन्तै मन पर्छ । यो मेरो रुचिको विषयपनि हो । अहिले सम्म तालिम लिने अवसर पाइएको थिइन । फेसबुकमा तालिम हुने मेसेज देखेर आयोजकको सम्पर्कमा पुगें । तालिम लिने अवसर पाए अत्यन्तै खुशी छु । विदेशवाटै तालिममा सहभागीता जनाउने अवसर दिएकोमा आयोजक थारु पत्रकार संघलाई धेरै धेरै धन्यवाद । पूर्वका साथीहरुको सहभागीता कम पाए अलि दुख लाग्यो । थारु पत्रकारहरुको आन्तरिक विवाद सुनेको थिए । थारुहरु मिलेर जानुको विकल्प छैन । सबै मिलेर जानुस ।
मनहरीमा ट्रक पल्टिँदा १ युवकको मृत्यु
महोत्तरीमा एक महिला कैदीको मृत्यु